[Saturday, January 6th, 18] :: Diyaargarowga madaxweyne Farmaajo oo si weyn looga dareemayo Garoowe
Garoowe (RH) Wararka ka imaanaya magaalada Garoowe ee xarrunta Puntland, ayaa ku warramaya in magaalada si weyn looga dareemayo diyaargarowga madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo berri tagaya magaaladaas.
Waddooyinka magaalada ayaa lagu xardhay calamada Soomaaliya iyo Puntland, sidoo kale waxaa magaalada lagu dhajiyey sawirka madaxweynaha iyo tabeelooyin ay ku qoran yihiin hal ku dhigyo lagu soo dhaweenayo madaxweynaha Soomaaliya.
Dadweynaha magaalada ayaa aad u hadalhaya imaatinka madaxweynaha ee Garoowe waana markii ugu horreysay ee madaxweynaha Puntland uu tago Garoowe iyo Puntland tan iyo markii uu xilka ka qabtay horaantii sannadkii 2017-ka.
Ammaanka magaalada ayaa aad loo adkeeyay, waxaana magaalada gaaray wafdi hordhac u ah magaalada kuwaasoo ay ku jiraa ciidamo ka tirsan madaxtooyada oo ammaanka madaxweynaha sugaya inta uu joogo magaalada.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa la sheegay in ay maalmo joogi doonaan Muqdisho isagoo booqan doonna goobo muhiim ah sida dekedda iyo garoonka diyaaradaha Konoko ee Garoowe ku yaalla kaasoo dhismihiisa uu meel gabagabo maraya.
posted on Saturday, January 6th, 18